(Waxaa laga soo toosiyay Iftiin)
Ileys (; ) sidoo kale loo yaqaano Iftiin waa falaadho electromagnetic taas oo u muuqata Aadamaha. Qoraxda ayaa ah meesha dhulku ka helo iftiinka. Inta ugu badan ereyga ileys waxaa loo isticmaalaa iftiinka ili qabateyga ah, laakiin micnaha iyo noocyada soo hoosgalaya intaas way ka badan tahay; waxaana ka mid ah iftiinka aan la arki karin iyo noocyo kale. Sidoo kale, iftiinka ili qabatayga ah waxaa loo yaqaanaa mowjado dhaadheer oo iskujira 400–700 nanometre (nm). Moowjadaha iftiinka heerkoodu waa kuwo kala duwan qiyaaas ahaan ka bilaabma 430 ilaa 750 terahertz (THz). Halbeega lagu cabiro iftiinka waxaa loo yaqaanaa terahartis (astaatedu tahay THz).